၁၄၅ နှစ်အတွင်းရှန်ဟိုင်း၏အဆိုးရွားဆုံးသောအပူလှိုင်းမှာလူ ၄ ဦး သေဆုံး ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
၁၄၅ နှစ်အတွင်းရှန်ဟိုင်း၏အဆိုးရွားဆုံးသောအပူလှိုင်းမှာ ၄ ယောက်သေဆုံးခဲ့သည်
မော်နီကာဆန် | | အပူလှိုင်းများ
ပုံ - Xinhuanet.com
ကမ္ဘာ့နေရာများစွာတွင်နွေရာသီတွင်အပူချိန်တိုင်းတာသည့်မီတာအတွင်းရှိမာကျူရီသည်မြင့်မားသောတန်ဖိုးများသို့မြင့်တက်သွားသော်လည်းအပူကိုလေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါအပူ sensation သည်ဒီဂရီများစွာပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။
ရှန်ဟိုင်း (တရုတ်) တွင် ၁၄၅ နှစ်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးအပူလှိုင်းကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် ၄၀.၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူကိုယ်ခန္ဓာသည်အာရုံခံမှု ၅၀ºC ရှိသည်။ ဒါဟာအရမ်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တယ် လူ ၄ ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်.
El အင်္ဂါနေ့ အပူချိန်တိုင်းတာမှုသည် ၄၀.၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရောက်ရှိလာသဖြင့်မြို့တော်သည်အပူချိန်မြင့်တက်မှုအတွက်တတိယအကြိမ်အနီရောင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် စတုတ္ထအပူဆုံးနေ့ မှတ်တမ်းများမှတ်တမ်းတင်ခံရဖို့စတင်ကတည်းက 145 နှစ်အကြာ။ အပူလွန်ကဲမှုကြောင့်လူတို့၏ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟုဒေသခံသတင်းစာကဖော်ပြသည် ရှန်ဟိုင်းနေ့စဉ်.
ယခုအချိန်တွင်လူလေး ဦး သေဆုံးကြောင်းလူသိများသည်၊ သူတို့ထဲကနေစဉ်အတွင်းလမ်းပေါ်၊ လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသည့်နေအိမ်တွင်နေရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့နေရသောသက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အပူလေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားရောဂါဗေဒများအတွက်ဆေးရုံတင်နေကြသည်.
ထို့အပြင်နွေရာသီအတွင်း၌ကာကွယ်ခြင်းမရှိဘဲနေအပြည့်အဝနေခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်၊ အပူလှိုင်း, ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိမေ့သွားစေနိုင်သည်၊ နှလုံးသို့မဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှု၊ အဆုတ်သို့မဟုတ် ဦး နှောက်ဖောနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါချို့တဲ့မှုကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့ခံရနိုင်သည်။
နေကာမျက်မှန်နှင့် ဦး ထုပ်ဆောင်း။ နေရောင်ခြည်မှကာကွယ်ပါ။
ဒါပေမယ့်အပြင်, ငါတို့ရပါမည် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုရပ်တန့်ပါ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကြောင့်လူတွေသေမသေစေချင်ဘူးဆိုရင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » အပူလှိုင်းများ » ၁၄၅ နှစ်အတွင်းရှန်ဟိုင်း၏အဆိုးရွားဆုံးသောအပူလှိုင်းမှာ ၄ ယောက်သေဆုံးခဲ့သည်
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးမိုးကြိုးမုန်တိုင်းနှင့် Maracaibo စံချိန်